Medellin bilitere n'etiti ndị njem North America
Home » Njem njem » Medellin bilitere n'etiti ndị njem North America
Medellin Convention & Visitors Bureau na-ekwupụta uto na njem na-aga n'ihu na mmụba pasent 18 na ndị njem si US n'etiti Jenụwarị na Ọgọstụ nke 2018, ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga. Ihe karịrị ndị America 528,000 gara Colombia na 2017, nke 105,735 gara Medellin, na-anọchite anya 16 pasent nke ndị mbata niile. Obodo Colombia a ma ama amatala mgbanwe mmekọrịta ọha na eze na obodo mepere emepe n'ime afọ ole na ole gara aga, ọ bụkwa isi obodo nke abụọ a kacha eleta na mba ahụ. Otu nkà na ọdịbendị na-apụta na Latin America, Medellin emepewo ka ọ bụrụ ebe dị iche iche na-adọta ma ndị njem ma azụmahịa ma na-enye ọtụtụ ahụmịhe.
“Medellin nwere otu akụkọ mgbapụta kachasị egwu, na-emeri akụkọ ihe mere eme ya na-akpata ọgba aghara dị ka otu n’ime obodo ndị kasị dị ize ndụ n’ụwa. Taa, obodo ahụ amaliteghachiri onwe ya kpamkpam site n'ilekwasị anya na ihe ọhụrụ, ihe okike na nka. Ndị njem ga-ahụ obodo gbanyere mkpọrọgwụ na ngosipụta ọdịnala ya nke egwu, ịgba egwu, akwụkwọ, ihe nkiri na ndị ọzọ, ”Ana Maria Moreno Gómez, Director nke Medellin Convention & Visitors Bureau kwuru. N'etiti okwu ọdịbendị kachasị ewuli elu gụnyere egwu tango na salsa, egwu hip hop, na silleteros ndị na-arara onwe ha nye nka nke ngosi ifuru, ọkachasị n'oge Ememme Medellin Flower a ma ama.
N'afọ a, Medellin nwetakwara ọkwa mba ụwa, nke nyerela aka na uto njem ya. Obodo ahụ nwetara mmụba pasent 23 na ndị njem si mba ọzọ site na Jenụwarị ruo Ọgọstụ. Na Jenụwarị, ọ meriri 2018 Choice Choice Award na ụdị nke 'Ebe kachasị elu na ịrị elu.'
Na mgbakwunye na ndị njem ezumike, ndị njem azụmaahịa abawanyela na mkpa yana obodo nabatara nkezi nke ndị njem azụmahịa 83,000 kwa afọ kemgbe 2014, dị ka ProColombia si kwuo. Nke a bụ nnọchite anya obodo na-agbanwe mgbe niile, karịchaa n'ime nzukọ nzukọ. Kwa afọ, Medellin na-akwado ọtụtụ mmemme mba ụwa na ndị ama ama bụ Smart City Business American Congress & Expo na 6th IPBES Plenary Assembly na 2018, World Economic Forum maka Latin America na 2016 na World Tourism Organisation General Assembly na 2015 .
Akụkụ ọzọ dị mkpa maka Medellin bụ ndị ọpụpụ na ndị lara ezumike nka. Edepụtara Colombia dị ka otu n'ime ebe 10 kachasị elu ịla ezumike nká na 2018 site na International Living. Ihe ndekọ na-egosikwa mmụba pasent 85 nke US Social Security na-akwụ ụgwọ na Colombia na 2017, ma e jiri ya tụnyere 2010, na-eme ka ọ bụrụ mba kachasị elu na Latin America na Caribbean iji nata ndị a, mgbe Mexico gasịrị. Ọmụmụ ihe a anaghị agụnye ndị lara ezumike nká, mana ha erubeghị afọ ịnata Nchedo Nlekọta.
Ma ọ bụ naanị ịga ma ọ bụ kwagara ọhụrụ, obodo ukwu nke obodo a na-enye ahụmịhe kachasị mma maka imikpu onwe onye na ọdịbendị, yana ihe omume na-aga n'ihu, dị nso. Otu n'ime ihe onwunwe kachasị dị n'obodo ahụ bụ nhọrọ nke ihe ngosi nka dịka Museum of Modern Art (nke a rụzigharịrị n'oge na-adịbeghị anya), Museum of Antioquia (nke a rụzigharịrị n'oge na-adịbeghị anya), Museum of the University of Antioquia and the Casa de la Memoria Museum, a multimedia ncheta ihe ngosi nka nke na-akowa ihe banyere ihe ike dakwasiri obodo a kemgbe 80s. Enwekwara ọtụtụ ebe ndebe ihe ngosi dị nta, usoro ọba akwụkwọ ọha na eze, yana ebe ọdịnala dịka Moravia Cultural Center - ha niile na-eku ume n'obodo.
Medellin na-akwado ọtụtụ ememme dị iche iche nke afọ na-eme omenala na ọdịnala ya. Otu n'ime ndị a ma ama gụnyere: Ememme International Tango na June, nke na-eweta ndị ịgba egwu ọkachamara sitere n'akụkụ ụwa niile iji mee ememme ọdịnala tango nke obodo ahụ; Feria de las Flores n’August, nnukwu emume iji cheta ọnụnọ paisa nke Medellin site n’ọtụtụ ihe omume dịka asọmpi pọọsụ, ịgba ịnyịnya, egwu, na ndị ọzọ; na Ememme Lights na ekeresimesi na Disemba, mmemme nke oge ọdịnala ebe ndị ọchụnta ego na ndị bi n'otu obodo na-esonye na-eme ememme ezumike site n'igosi oke ngosi ọkụ na ngosipụta gafee obodo.
Na mgbakwunye na onyinye ọdịnala, Medellin nwekwara ọtụtụ ihe maka ndị hụrụ okike n'anya. N'ebe nchekwa Parque Arví, ndị ọbịa nwere ike ịchọpụta ihe karịrị 160 ụdị bromeliads, anthuriums na orchids nke dị ugbu a na mkpochapụ. Ihe omuma ndi ozo di n’èzí maka ndi njem gunyere njem njem, agritourism na igwe. Ọrụ ọzọ a ma ama bụ nnụnụ na urukurubụba na-ele anya, nke enwere ike ịme na ebe obibi anụ ọhịa Alto de San Miguel nke gbasara ihe karịrị 2,000 acres. Echere na otu n'ime obodo ndị kachasị mma ma maa mma nke Colombia bụ Guatapé, nke dị awa abụọ site na Medellin, nke na-enye ọrụ mmiri na Piedra del Peñol a ma ama, nnukwu, ugwu ịrị elu nke na-agbago ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 700 ụkwụ ma na-eleghara ebe mara mma na lagoon n'okpuru.
“Medellin na-agba mbọ ịbụ obodo n exemomi n thatomi nke na-adọta ndị njem mba ofesi. Obodo ahụ enweela ọganihu dị ukwuu n'ime afọ 30 gara aga, ọkachasị n'ihi ndị isi gọọmentị na-ahụ ọhụụ bụ ndị dị mkpa na ntopute nke onyinye njem nleta ya na mkpesa ụwa niile. Anyị na-akpọ ndị njem ka ha bịa leta anyị, bie ndụ pụrụ iche pụrụ iche, mụta maka akụkọ ihe mere eme anyị ma nwee ọ ourụ na ebe nkiri anyị ka ha nwee ike nwee mmasị na ebe a na-aga, “ka María Fernanda Galeano, onye ode akwụkwọ nke Economic Development nke Medellin kwuru.
E debere na ugwu abụọ ugwu ugwu Andean, Medellin bụ isi obodo Antioquia - mpaghara a kacha mara amara maka kọfị kọfị na ala ifuru ya. A maara ya dị ka Obodo nke Mmiri Ebighị Ebi n'ihi ọnọdụ ihu igwe ya na-atọ ụtọ nke na-erugharị n'etiti 60 Celsius ruo 80 Celsius F n'afọ niile. Ndị ọbịa nwere ike ịgafe na Medellin Jose Maria Cordova International Airport na ụgbọ elu ndị na-esite na ọnụ ụzọ mbata US gụnyere Miami, Ft. Lauderdale na New York.
Ala ọmajiji ọhara 6.1 dakwasịrị North Island nke New Zealand
Ọgwụgwụ nke oge ọkọchị dabara adaba na uru na họtelu UK
Onye isi ala nke Italy na G20 Rome Ntuziaka maka Ọdịnihu nke njem